रामधुनी ईटहरी सिमा बिवादमा छलफल -
रामधुनी ईटहरी सिमा बिवादमा छलफल
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन ०१, २०७५ समय: २:०१:१६
झुम्का,असोज १ । रामधुनी ईटहरी सिमा बिवादको बारेमा छलफलहुदा रामधुनी नगरपालिका अन्तर्गत रहेको कित्ताको कर,दस्तुर ईटहरी उपमहानगरपालिकाले लिदै आएको खुल्न आएको छ । साबिक सिंगीया गाबिस वडा नं. १ ‘ख ’ को २७० कित्तामा रहेको घरघडेरीहरुको नक्सापास,दस्तुरहरु त्याहाका स्थानियहरुले ईटहरीलाई बुझाउदै आएको बताएका छन् ।
रामधुनी नगरपालीकाले आफ्नो कित्तामा रहेको जग्गामा स्वागत बोर्ड राख्ने क्रम्मा पकलीका केहि स्थानियहरुले बिरोध गरेपछि सिमाबिवाद सामाधान छलफलगर्ने क्रममा स्थानियहरुले सो बारेमा जानकारी दिएका थिए । सिंगीया गाबिस रामधुनी नगरपालिकामा समायोजनहुदा नगरपालिकाले आफनो सिमाना खोजि गर्दै जदा सो कित्तामा ईटहरी उपमहानगरपालिकाको उपभोग भै रहेको देखिएको हो । सम्पति कर,सिफारी दस्तुतर,घरनकसा पास समेत गरेको स्थानियले बताएका छन् ।
सो कित्ताका स्थानिय राजकुमार निरौले आफु २०३५ साल देखिनै पकली गाबिसबाट कारोवार गर्दै आएको बताए । नक्सा अनुसार सिंगीया गाबिसको रहेको मलाई थाहा थियो तर पकली गाबिस जादा त्याहाका कर्मचारीले हामिलेनै गर्दिन्छौ भनेर आफुलाई सहज भएपछि त्यहिबाट कारोबार गर्दै आएको बताए । साबिक पकली गाबिस हुदादेखिनै सिंगीया गाबिसका जनतालाई अन्यौलतामा राखेर सेवा दिदै आएका थिए ।
ईलाका प्रहरी पकली पनि रामधुनीको कित्ता अन्तर्गतनै रहेको छ । भासि पकली नामाकरण रहेको सो ईलाका प्रहरी पछि गएर नामपरिवर्त गर्दै पकली मात्र रखिएको खुल्न आएको छ । छलफलमा सहभागी भएका ईलाका प्रहरी प्रमुख अम्बरबहादुर निरौलाले पहिले यो भासि पकलीनै नामााकरण रहेको बताएका थिए ।
हाल पुनःसंरचना अनुसार ईटहरी वडा नं. १७ को सम्बन्धित सिमा भएकोले वडा अध्यक्ष भगवानलाल साहले यो जग्गा रामधुनीकै हो ,त्याहा पर्ने जग्गावालाहरुले सबै सेवा रामधुनीबाटै लिनुपर्ने बताए । ईटहरीको कुनै अधिकार नै छैन् रामधुनीको कित्ताकाट गरेर ईटहरीले लान सक्यो भने हुन्छ नभए अधिकार नरहेको बताए । साहले रामधुनीले आफनो कित्तामा स्वगतबोर्ड राख्न सक्ने समेत बताए ।
यसरी निशकर्ष भैसकेको छलफलमा त्याहाका केहि स्थानियहरुले राजनितिक छबि देखाउदै सिमाबिवाद लब्याएका छन् । छलफलमा ईटहरी पकलीकै स्थानियहरुले बिश्व युद्ध,नालापानिका कुरा निकाल्दै वडा सदस्यलाई बिरोधगर्दै छलफलमा टुङ्गो लाग्न दिएन । नगर प्रमुख द्धारीकलाल चौधरी छलफलमा सहभागी भएर जवाफदिए मात्र मान्यहुने ईटहरी वडा नं. १७ पकलीका स्थानियहरुले अडान लिएका थिए ।
ईलाका प्रहरी पकलीमा भएको छलफलमा रामधुनीका मेयर जयप्रकास चौधरी,वडा अध्यक्ष १ का महेश चौधरी, वडा ३ का वडा अध्यक्ष राजकुमार चौधरी,वडा सदस्य बिन्देश्वर चौधरी,झुम्का उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष धर्मेन्द्र साह,महा सचिव नबिन चौधरी ईटहरी १७ वडा अध्यक्ष साह,वडा सदस्य, ईलाप्रहरीबाट ईन्चार्ज निरौला लगायत पकलीका स्थानियहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।